Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ka tacsiyeeyay geeridii Xasan Abshir – Radio Daljir
Luulyo 12, 2020 4:56 g 0
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane; Xasan Cali Khayre ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray Ummadda Soomaaliyeed iyo Qoyskii uu ka baxay Ra’iisul wasaarihii hore ee Dalka, Xasan Abshir Faarax.
”Waxaan tacsi u dirayaa Ummadda Soomaaliyeed iyo Qoyskii uu ka baxay Ra’iisul Wasarihii hore ee dalka Xasan Abshir Faarax. Waxa uu kaalin muhiim ah ka soo qaatay dib-u-dhiska dalkeena. Waxaan Alle uga baryayaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo, innagana uu samir naga siiyo.”
Marxuum, Xasan Abshir Faarax oo ahaa Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sidoo kale soo qabtay xilal kala duwan.
Allaha u naxariistee Xasan Abshir Faarax oo ahaa 75 sano jir ayaa ku dhintey isbitaal ku yaal magaalada Ankara ee dalka Turkiga.